တကိုယ်တော် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အငြိမ်းစား လေတပ်ဗိုလ်ကြီး ဦးဇော်ညွန့်
တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၆၄)
၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးတင်နေစဉ်မှာ၊ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြ မှုနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူ၊ တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်း အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီး ဦးဇော်ညွန့် ဟာ၊ မကြာသေးခင်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်လျှောပေါ့ပေးမှုနဲ့၊ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” ကဏ္ဍမှာ ဦးဇော်ညွန့်ရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်တွေကို၊ ဦရော်နီညိမ်းက မေးမြန်းဆွေးနွေး တင်ဆက်ထား ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဦးဇော်ညွန့်ကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသမဂ္ဂ ဆိုင်းဘုတ်အောက် ကနေ ဆန္ဒပြနေတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ နောက်တခေါက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်း ရေး ကိုထင်ကျော်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆန္ဒပြတာကိုလည်း ထပ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ ကျနော်ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းမှာ (၁၀) တန်း ကလေး တွေ၊ တော်တော်ဆင်းဆင်းရဲရဲပါပဲ၊ အဲဒီမှာ စာသင်နေတာ။ နေ့ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ မနက်အစောကြီးငါးခုတ် ပြီးတော့ ဈေးကိုအရောက်ပို့ဖို့ လုပ်ကြရတဲ့ကလေးတွေဗျာ။ အဲဒီ (၁၀)တန်း လူငယ်တွေကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရန်ကုန်မှာပဲ၊ အဲဒီလိုသင်နေရင်း လောင်စာဆီဈေးတွေ မြှင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်၊ ကျနော့် ဆီက ကလေးတွေ ထဲက သုံးပုံတပုံလောက်ဟာ နေ့ချင်း ညချင်းကို ပြုတ်ထွက်သွားတယ် ဗျ။ လာမတက်နိုင် တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတော့၊ နောက်တခါ အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ လူထုကိုယ်တိုင်က ဒီလောင်စာဆီဈေးတွေ မြှင့်တင်မှု ကို လူထုမှာလည်း အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေ မကျော်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး၊ ကိုထင်ကျော် တို့နဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့၊ ဒီဥစ္စာတော့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှ ရမယ်ဆိုပြီးတော့၊ ကျနော် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ပါ ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ အဲဒီကိစ္စအတွက် ဦးဇော်ညွန့် အကျဉ်းထောင်မှာ ကျခဲ့တာကို၊ အဲဒီအချိန်က မီဒီယာတွေ မှာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လောက် ကြာခဲ့ပါသလဲ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ သုံးလလေးလ လောက်ပါပဲ ခင်ဗျ။ အင်းစိန်ထောင်ထဲကနေ ပြန်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး အသုတ် လွှတ်လိုက်တဲ့ လေးယောက်ထဲမှာ ကျနော်ပါပြီး၊ လွတ်လာခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို စောစောစီးစီး လွတ်လာရတာလဲ ခင်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆို၊ အဲဒီအ ချိန်တုန်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုထင်ကျော်ဆိုရင် ခုထိ မလွတ်သေးလို့။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ဒီလို ဗျ။ ပြောရရင်တော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဂမ်ဘာရီ (ကုလသမဂ္ဂအ တွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်) လား ဘယ်သူလား မသိဘူး၊ လာတာ တခုရှိတယ်။ အဲဒီတချက် ရှိတယ်။ နောက်တခါ သူတို့ ဆက်စပ်ကြည့်တော့လည်း ကိုထင်ကျော်နဲ့ ကျနော်နဲ့ ကလည်း ဟိုး အရင်ထဲက အဆက်အစပ်မျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့၊ ကျနော့်ကိုလွှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်၊ ကျနော်သည် နောက်ပိုင်း မှာ ဆက်ပါဝင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့၊ အဲဒီလိုမြင်လို့ ကျနော့်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့၊ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဦးဇော်ညွန့်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင် မဟုတ်ပေမယ့်၊ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို သူ့အိမ်ခြံဝင်းထဲ နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်လာတာကို လက်ခံတဲ့အတွက်၊ အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ၊ ဦးဇော်ညွန့် သွားပြီး ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်၊ ဦးဇော်ညွန့် အဖမ်းခံခဲ့ရတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်က NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့ ဘယ်အတွက်ကြောင့် ဒီဆန္ဒပြမှုကိုလုပ်ဆောင် ရသလဲဆိုတာ၊ အကျဉ်းချုပ်ပြီး ရှင်း ပြပါ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ အချက်သုံးချက်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ ပထမဆုံးအချက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက် နေ တာက၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အင်မတန်အရေးကြီးတာက ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဗျ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ရခဲ့တယ် ခင်ဗျ။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ကျွန်ဖြစ်တယ်။ ခေတ်ရေစီး ကြောင်းအရ ကျွန်ဖြစ်မှာကတော့ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ အဲဒီအချိန်အခါတုန်းက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကနောင်မင်း သားကြီးလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ရထားတယ်။ ရပေမယ့်လည်း ဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ဒီနိုင်ငံက သေ သေချာချာ မထိန်းသိမ်းမစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အခါကျတော့၊ ကနောင်မင်းသားကြီး လုပ်ကြံခံခဲ့ရတယ်။ ကျွန် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲက လွဲလို့၊ ကျန်တဲ့ ဒုတိယနဲ့ တတိယစစ်ပွဲတွေမှာ၊ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် အောက်တန်းနောက်တန်းကျပြီး ကျွန်ဖြစ်ရတာ ဗျ။ ဒါသည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကို မ ထိန်းသိမ်းမစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ခံလိုက်ရတဲ့ဟာ။ နောက်တခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ တနိုင် ငံလုံးကို ဖဆပလ (ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်) အနေနဲ့ စုစည်းလာပြီးတော့၊ လွတ် လပ်ရေးအတွက် လုပ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာပဲ၊ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့မျက်စေ့အောက်မှာပဲ၊ ဒီခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်တယ်။ အခု ဒီကနေ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဟာတွေသည်၊ ဒီ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ဖြစ်နေရတာ ဗျ။ အခု နောက်ထပ်တခါ ထပ်ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့၊ ဘယ်လိုမှ ကျနော်တို့ အဆုံးရှုံး အထိအခိုက် မခံနိုင်ဘူး။ အဆုံးရှုံးခံ လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒါသည် တိုင်းပြည်အတွက် ထိခိုက်တဲ့ဟာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ နောက်တချက်က ကျနော်တို့ နိုင် ငံမှာ ဖြေရှင်းရမှာက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းစဉ်နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းရမယ်။ အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီနိုင်ငံရေးထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့၊ အကျဉ်းထောင်ထဲ ချမှာသည် နိုင်ငံအ တွက် နိုင်ငံရေးအရ အင်မတန် ဆိုးရွားတဲ့ ကိစ္စဗျ။ နောက် မလျော်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်လည်း ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့၊ ဒါကို ကျနော်တို့ ဒီအတိုင်းကြည့်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ ခုန ကျနော်ပြောတဲ့ အချက်တွေ ဖေါ်ထုတ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေ မယ့် အဓိက အကျဆုံးအချက်က ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုက သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်စေ၊ (အုပ်ချုပ်နေသူအစိုးရကို) အကြံပေးဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်း မရှိဘူး ခင်ဗျ။ သူတို့က နားထောင်မှာ လည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအခါ ဒီလို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပြန်ဘူး ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကျနော်ကလည်း တိုက်ရိုက်ပဲ၊ ဒါတွေ ငါပြောချင်လို့၊ လူကြီးတွေကို ပြောဖို့လိုတယ်လို့ အမြန်ဆုံးအသိပေးဖို့ လိုတယ်ထင်လို့၊ ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့၊ ဒီလိုမျိုးနဲ့ တင်ပြပြီး အဆင့်ဆင့် သွားခဲ့ရတာပါ ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဦးဇော်ညွန့်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ၊ ထောက်လှမ်းရေးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း၊ စာတမ်း တွေ ရေးခိုင်းပြီး၊ မေးမြန်းတဲ့အချိန်အခါမှာ၊ ဦးဇော်ညွန့်ရဲ့ သဘောထားတွေကို တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့၊ ပြောချင်တာလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါသည် အမြန်ဆုံး အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာဆီ ရောက်သွားဖို့ နည်းလမ်းက ဒါပဲ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျနော့်ကို မေးစရာဆိုလို့ ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ် မူတည်ပြီး မေးစ ရာ ရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့အခါ မှာ၊ ပထမဆုံးမေးခွန်းက ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုဆန္ဒပြရသလဲ ဆိုတာပါ။ အဲဒီကိစ္စ နဲ့ပဲ ရှင်းစရာ ရှိတယ်။ ကျနော်က NLD ဖြစ်စေ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ အဆက်အ စပ်မှု မရှိတာကိုး။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒီတခေါက်ကျတော့ ဘယ်လို အရေးယူပါသလဲ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ကျနော် ဆန္ဒပြတဲ့နေ့က စစ်ကြောရေးခေါ်မှာပေါ့ ဗျာ၊ အဲဒီမှာ တညနေလုံး တညလုံး အဲဒါကို လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့၊ နောက်တနေ့မှာပဲ အင်းစိန်တရားရုံးမှာ (ပုဒ်မ) ၅၀၅ (ခ) နဲ့ တရားစွဲတင်ပါ တယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ ဆူပူအုံကြွအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ပြစ်ဒဏ် ဘယ်လောက် ချလိုက်ပါလဲ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ကျနော့်ကို ချတာ နှစ်နှစ်ပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ နှစ်နှစ်ဆိုတော့၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့မှုနဲ့ လွတ်လာတယ်ဆိုတော့၊ အခု နှစ်နှစ်ပဲ ပြည့်တော့မယ်။ နှစ်နှစ် ပြည့်ခါနီးမှာ လွတ်တာပေါ့။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ နှစ်နှစ်ပြည့်ဖို့ (၇)ရက်ပဲ လိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကျနော်မလွတ်လာခင်မှာ ထောင်မှူး ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီ (၇) ရက်လျှော့ပေါ့ပေးတာကို မခံစားချင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ တကယ်လို့ နောင်များ ကျနော် ဒီလိုပဲလုပ်ကိုင်လို့ ထောင်ထပ်ကျခဲ့လို့ ရှိရင်၊ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် တွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်၊ ယခင်ခံစားပြီးသူများ နောက်ထပ်မခံစားစေရ ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရင်၊ အခုခံစားလိုက် တဲ့ (၇) ရက်ထဲနဲ့ ကျနော် ထောင်ထဲမှာ ပိတ်မိနေလိမ့်မယ်လို့ ပြောတော့၊ သူတို့ကတော့ တမျိုးတွေးတာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ရိုးရိုးသားသား ဒီအတိုင်းပဲ ပြောတာ ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီးဦးဇော်ညွန့်ဟာ၊ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁၈) ကနေ၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့၊ တပ်မတော်(လေ)မှာ အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် စီ မံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်၊ တပ်မတော်ကနေ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်နဲ့ အငြိမ်းစားယူပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်နေစဉ်မှာပဲ၊ ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှုအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကာလမှာ၊ ပထမ ကျနော် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာ နသမဂ္ဂမှာ တာဝန်ကျပြီးတော့၊ နောက်တခါ စီမံ/ဘဏ္ဍာ တခုလုံးရဲ့ သမဂ္ဂမှာလည်း၊ ကျနော် ဆက်ပြီးတော့ ပါဝင်ရပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ တပ်မတော်အာဏာရယူလိုက်တဲ့ အချိန်အခါကျတော့၊ ကျနော်လည်း တခြားဝန်ထမ်းများနည်းတူ ဌာနကနေ အလုပ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် “အလုပ်သမား သွေး စည်းညီညွတ်ရေး” (Labor Solidarity) L.S. အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့၊ တရားဝင်အဖွဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီအဖွဲ့ ထူ ထောင်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကျနော် ဆက်ပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ခဲ့လဲ ဆိုတော့၊ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေက အလုပ်သမားတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း တွေ၊ နောက်တခါ အလုပ်ကနေ အထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူ တွေ၊ ဒီလူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့၊ အလုပ်သမားတွေ သည် ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ ဆက်ပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ L.S. ကို၊ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ တာ ပါ။ အဲဒီကနေပြီးတော့ နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းထဲမှာ၊ တထောင့် တနေရာ အဝေးတနေရာကနေ ဆက်ပြီး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကာလ တော်တော်ကြာကြာပေါ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ ကျနော် ပြည်ပကို ရောက်သွားခဲ့ ပါတယ်။ ပြည်ပမှာ ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ ကျနော် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တပိုင်းက အဝေးရောက်အလုပ်သမားအစည်း အရုံး ပေါ်ဖို့။ နောက်တပိုင်းက ကိုရော်နီတို့ ကြားဘူးမှာပါ။ ဗိုလ်မှူးကြီးစိန်မြ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အချိန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှု အချိန်အခါတွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အတွက် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် ကွယ်လွန်သူ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူး ကြီးစိန်မြ) ရဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (PDF) (People’s Defense Force)မှာ ကျနော် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လုပ်ကိုင်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ၊ ကျနော့်အတွက် ဆက်ပြီးတော့ လုပ် ကိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်တာက ပိုပြီးတော့ သင့် မြတ်မယ်လို့ ယုံ ကြည်လာတဲ့အခါကျတော့၊ ကျနော် ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ (သက်ဆိုင်ရာက) လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ နှစ်လကျော်လောက် လုပ်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့၊ ကျနော် ကျောင်း ဆရာတယောက်အနေနဲ့၊ ဆက်ပြီး ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဦးဇော်ညွန့် ဒီလိုမျိုး ဒီတခေါက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့ နောက်၊ ဘွားကနဲ ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပြန်လွတ်လာတာ တွေ့နေရပြီ။ နောက်တခါ အခု ဘာအသံ ပြန်ထွက်လာသလဲဆိုတော့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာ။ စစ်သား ဟောင်းဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက စစ်သားဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ လက်ရှိ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကို၊ စစ်သား စစ်သားချင်း၊ စစ်သားစကား ပြောသွားတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လိုဟာမျိုး ဖြည်းဖြည်းသက်သာညင်ညင်သာသာနဲ့ သွားတဲ့ဟာမျိုးကို မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း သွေးထွက်သံယိုတွေနဲ့ သွားကြရမယ့် အာရပ်နိုင်ငံတွေက တော်လှန်ရေးမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ ရလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးသွားတဲ့အခါမှာ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာ ပြန်ပြီး မျှော်လင့်စရာဆိုပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတော့၊ ဦးဇော်ညွန့်ကော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး က လွဲရင် အခြား မရှိဘူး။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်မယ်/မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့၊ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်တော့ ဖြစ် လာမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာသာ ရှိပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒ ဟာ အရမ်းကိုပြင်းပြနေတယ်လို့၊ ကျနော်ယုံကြည်ထားတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကို ဥပဒေနဲ့ အညီ ဖေါ်ထုတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည် အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး)ဘယ်တော့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ၊ အဲဒါပါပဲ။ ကျနော်တို့သည် အစွန်းရောက်တဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေအရ သွားလို့ မရဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအစိုးရသည် အစိုးရ ဖြစ်ပြီး တည်ရှိနေတာကို အရှိတရားတခု အဖြစ် ကျနော်တို့က လက်ခံရ လိမ့်မယ်။ တခါ၊ နောက်ထပ် အရှိတရားတခု ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ နောက်မှာ ပြည်သူလူထုကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အရှိတရားကိုလည်း အစိုးရဘက်က လက်ခံထားရ လိမ့်မယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ထပ်တဘက် ရှိနေသေးတယ် ခင်ဗျ။ နောက်တဘက်မှာက တိုင်းရင်း သား လူမျိုးစုတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အားလုံးပါဝင်ရမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖို့ မမြင်ဘူးလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ဟာ မှန်ပါတယ်။ အင်မတန် မှန်ပါတယ်။ ဒေါ်စုလည်း တိုင်းရင်းသားတွေမပါရင် မရ ဘူးဆိုတာ ပြောထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်း CRPP (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား ပြု ကော်မီတီ)တို့၊ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ပတ်သက်နေတွေကို အလေးအနက်ထားပြီး ညှိနေတဲ့အခါမှာ၊ စရမယ့်နေရာ pointသည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေ စရမယ့်ဟာပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခု သူတို့လုပ်ထားတဲ့ စနစ်သစ်အရ၊ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီ အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ဖြစ်ပေမယ့်၊ အရပ် သားတွေပဲ ဖြစ်နေတော့၊ နှစ်အုပ်စုခွဲပြီး ကြည့်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။ တပ်မတော်က မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင် တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်အပေါ်မှာ မျှော်လင့်လို့ ရမလား ခင်ဗျ။ ဒီအစိုးရနဲ့ ဒီလွှတ်တော်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို တင်းခံနေရင်၊ တပ်မတော်က လုပ်ပေးနိုင်မလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ မျှော်လင့်အပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း မျှော်လင့်အပ်တဲ့ အခြေအနေမှာတော့ မရှိပါဘူး။ အခုအခြေအနေမှမှာတော့ မျှော်လင့်အပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊ ရှေ့က ဖြစ်ပြီးလာခဲ့တာတွေကို အခု တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တွေ့မှာပါပဲ။ အမျိုးသားညီလာခံကနေ စပြီးလိုက်တာ constitution referendum (ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ)၊ election (ရွေးကောက်ပွဲ) အားလုံး အတုတွေ နဲ့ချည့် လုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ လွှတ်တော်တရပ် အစိုးရတရပ်ကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ၊ မှန်ကန်တဲ့ ဟာကို မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မရခဲ့တဲ့ ရေစီးကြောင်းကြီးကြောင့်၊ ဘာပေါ်လာသလဲ ဆိုတော့၊ ကိုရော်နီတို့လည်း သိထားပြီးသားဟာပဲ၊ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးဆိုပြီး နိုင်ငံရေးနှစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ တဲ့ ဟာပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ အင်အားစုကြီးကို ဖယ်ထုတ်ပြီး စဉ်း စားလို့ကို မရဘူး။ ဒီအင်အားစုကြီးမပါပဲနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့ မရဘူးဆိုတာကို၊ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များလည်း သိကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ ကျနော့် အမြင်ပါ။ လက်ရှိ ရှိနေကြ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်တို့နဲ့ NLD ပေါ့။ အဲဒီ ဦးဆောင်မှုဟာ ဖဆပလ နောက်ပိုင်း မှာ၊ အစင်ကြယ်ဆုံးနဲ့ အခိုင်မာဆုံး ရရှိထားတဲ့ ဦးဆောင်မှုပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဦးဇော်ညွန့်ပြောတဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေး အနေနဲ့၊ ပြောမယ်ဆိုရင် တပ်မ တော်ဟာလည်း နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ ရှိနေတာပဲ။ လွှတ်တော်အတွင်းကနဲ့ အစိုးရက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို လက်မခံဘူးဆိုရင်၊ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို တပ်မတော်က လုပ်ပေးနိုင်တယ့် အနေအထား ရှိပါသလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးဇော်ညွန့် ။ ။ ဒီနေရာမှာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် များအနေနဲ့ ဘာကို သိထားပြီးသား ဖြစ်နေလဲဆိုရင်၊ အတိတ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး သူတို့ဆီမှာ ပါလာနေတယ် ဆို တာနဲ့နောက် ရှေ့ဆက်တဲ့ခရီးမှာ လွတ်လပ်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တာဝန်တာထမ်းတွေ ပါလာနေတယ်၊ ဆို တာပါ။ အဲဒါတွေကို မကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုရင်၊ တိုင်းပြည်အတွက်ကော ပြည်သူလူထုအတွက်ကော တပ်မ တော်သာမက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ အတွက်ပါ၊ အခက်အခဲတွေ တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကို၊ သူတို့ မြင်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါကို သူတို့သည် အမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တဲ့ အ တွက်ကြောင့်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုတဲ့ဟာသည် ပေါ်ပေါက်ရမယ်။ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ရည်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း၊ အဲဒီနှစ်ရပ် ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ပါ။ အဲဒါ အကောင်းဆုံးပါ။ အဲဒါ မဖြစ် နိုင်ရင်တော့၊ လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးသည် အရှိန်အဟုန် ကြီးမားစွာနဲ့ စစ်စစ်မှန်မှန် အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးကို ဦးတည်သွားပါလိမ့်မယ်။ သွားလည်း သွားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း၊ တပ်မတော် (လေ) အရာရှိဟောင်း၊ အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီး ဦးဇော်ညွန့်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြခဲ့တာပါ ခင်ဗျာ။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။